‘काम नलाग्ने’ भनिएका ट्राफिक लाइट नै बाल्ने तयारी – Online Khabar
२०७४ कार्तिक २८ गते १५:४२
ADB / World Bank जस्ता दातृ निकाय को ध्यान भनेकै कासरि ऋण दिए जस्तो गर्ने अनि काम अड्काउने नै हो। ताकि पास भइहाले अाफ्नो पश्चिमा कम्पनि मार्फत पैसा फिर्ता लाने, नभए काम अड्काएर नेपाल लाई अस्तव्यस्त गराइराख्ने षड्यन्त्र नै हो। नेपाली जनता ले बुझिराख्नु जरुरी छ !!
७. के चलचित्रले बम्पर ओपनिङ गर्दा एक दिने कलेक्शन डेढ करोडसम्म हुन्छ ?
८. ‘हामी गरीबको कोही रहेनछ’
१०. एसिया कपको फाइनलमा बंगलादेश र पाकिस्तानमध्ये कुन ?
१२. इमरान खानसँग सम्बन्ध विच्छेद गरेकोमा पछुतो छैन : रेहम
‘काम नलाग्ने’ भनिएका ट्राफिक लाइट नै बाल्ने तयारी
‘इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक कन्ट्रोल सिस्टम’ असफल
२०७४ कार्तिक २८ गते ९:०२ मा प्रकाशित
२८ कात्तिक, काठमाडौं । योजनाअनुसार काम भए केही समयमा काठमाडौंका मुख्य चोकमा बाटो काट्दा यात्रुले ट्राफिक लाइटको संकेत कुर्नुपर्नेछ । सवारीलाई रोकिने र गुड्ने निर्देशन ट्राफिक लाइटले नै गर्नेछन् ।
चुनावको मुखमा राजधानीमा ट्राफिक लाइट सञ्चालन गर्ने विषय चर्चामा आएको छ । तर, ती सबै पुरानै प्रणालीका हुनेछन् ।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा जडान हुने भनिएको ‘इन्टेलिजेन्ट ट्राफिक कन्ट्रोल सिस्टम’को योजना असफल भएको छ । त्यसका लागि एडीबीले सरकारलाई दिएको ३३ करोड रुपैयाँ पनि ‘फ्रिज’ भएको छ ।
काठमाडौं दिगो शहरी यातायात आयोजना (केएसयूपीटी)ले पूर्वयोजनाअनुरुप ट्राफिक लाइट जडान नगर्नेगरी उक्त सिस्टमका सबै कार्यक्रम खारेज गरेको हो ।
तीन पटक टेन्डर गर्दा पनि ‘ओभर बिड’ अर्थात् लागत अनुमान नाघेर प्रस्ताव आएकाले कार्यक्रम स्थगित गरिएको आयोजनाले जनाएको छ ।
एडीबीको ५१ प्रतिशत अनुदान र २१ प्रतिशत ऋण सहयोगमा उक्त सिस्टम जडान गर्ने योजना थियो ।
थन्किएका लाइटकै प्रयोग
नयाँ स्टिम लाइट जोड्ने विषयले तत्काललाई विश्राम पाएकाले सडकमा वर्षौंदेखि बिग्रिएर थन्केका लाइटकै मर्मतको तयारी शुरु भएको छ ।
लामो समयदेखि बिग्रिएर बसेका संकेत बत्तिलाई सडक विभागले ‘काम नलाग्ने’ बताउँदै आएको थियो ।
काठमाडौं महानगर, सडक विभाग र महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाले पुरानै लाइट मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेका हुन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पनि सडक विभागलाई तत्काल लाइट मर्मत गरेर सञ्चालनमा ल्याउन निर्देशन दिएको छ ।
सोही निर्देशनअनुसार विभागले मर्मतका लागि अध्ययन गर्न लागेको छ ।
मर्मतका लागि आवश्यक सहयोग गरिने महानगरका मेयर विद्यासुन्दर शाक्यले बताए ।
‘१÷२ ठाउँमा तत्काल सञ्चालनमा आउने छन् । क्रमशः अरु पनि मर्मत गरेर तत्काललाई व्यवस्थापन गर्ने निर्णय भएको छ,’ शाक्यले भने ।
सडकमा अलपत्र बनेका ट्राफिक लाइट ०६५ सालमा जापानी सहयोग नियोग जाइकाले जडान गरिदिएको थियो ।
केशरमहल, दरबारमार्ग, पुतलीसडक, सिंहदरबार, पद्मोदय मोड, गौशाला, कालीमाटी, थापाथली, माइतीघर, नयाँबानेश्वर, तीनकुने, कोटेश्वर, जडीबुटीलगायत चोकहरुमा ट्राफिक लाइट अलपत्र छन् । त्यतिबेला कतिपय स्थानमा यात्रुले बाटो काट्ने प्रयोजनका लागि मात्रै पनि लाइट राखिएका थिए । ती पनि काम नलाग्ने बनाएर राखिएको वर्षौं बितिसकेको छ ।
उपत्यकाका २० भन्दा बढी स्थानका ट्राफिक बत्ती बिग्रिएका छन् । तीमध्ये अधिकांश बनाउनै नसकिने अवस्थामा रहेको बताउँदै सडक विभागले मर्मतमा चासो दिएको थिएन ।
तिनको अवस्था अध्ययन गर्ने जिम्मा एक प्राविधिक समितिलाई दिइएको छ । समितिको प्रतिवेदनअनुसार मर्मत अघि बढाइने विभागका उपमहानिर्देशक मुक्ति गौतमले बताए ।
‘सकेसम्म पुरानै लाइट चलाउँछौं । नत्र, नयाँ प्रणाली खरिद गरेर जडान गर्छौं,’ गौतमले भने, ‘काठमाडौंमा सवारी जाम र व्यवस्थापनको कठिनाइ हेर्दा यो अपरिहार्य देखिन्छ ।’
लाइट नहुँदा दुर्घटना बढिरहेकाले तत्काल मुख्य चोकहरुमा यसको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखाका डीआईजी सर्वेन्द्र खनालले बताए ।
‘हामी विगतमा ट्राफिक लाइट सिस्टममा गइसकेका थियौं । अहिले पछाडि फर्केर ट्राफिकले हात हल्लाउँदै सवारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई चाँडो अन्त्य गनुपर्छ,’ खनालले भने ।
उनका अनुसार लाइट नहुँदा विगतभन्दा पाँच गुणा बढी ट्राफिक प्रहरीलाई सडकमा सवारी व्यवस्थापनका लागि खटाइरहनु परेको छ ।
सडक विभागका महानिर्देशक गोपालप्रसाद सिग्देलले काठमाडौंमा करिब दुई सय स्थानमा ट्राफिक लाइट राख्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । त्यसका लागि विभाग आफैंले चरणबद्ध रुपमा काम थाल्ने उनको भनाइ छ ।
पुनर्निर्माणकाे बाँकी काम सक्न थप ६ खर्ब लाग्ने !
आयात रोके लगत्तै चिनीमा मूल्यवृद्धि, अझै बढ्न सक्ने